NgoLwesibili, ngo-Mashi 22, i-2022 ULwesithathu, April 27, 2022 Douglas Karr
Uma usebenza kunkundla yokuphatha okuqukethwe edumile, ngokuvamile uzothola ukukhetha okuhle kwamathuluzi namawijethi angangezwa kalula ukuze kuthuthukiswe isayithi lakho. Akuwona wonke amapulatifomu analezo zinketho, noma kunjalo, ngakho-ke ngokuvamile kudinga ukuthuthukiswa okuvela eceleni ukuze kuhlanganiswe izici noma amapulatifomu ofisa ukuwasebenzisa. Isibonelo esisodwa, muva nje, bekuwukuthi besifuna ukuhlanganisa ukubuyekezwa kwe-Google kwakamuva kusayithi leklayenti ngaphandle kokwenza isisombululo.
I-QR Code Builder: Indlela Yokuklama Nokuphatha Amakhodi Amahle e-QR Edijithali noma Ukuphrinta
NgoLwesibili, ngo-Mashi 1, i-2022 NgoLwesibili, ngo-Mashi 1, i-2022 Douglas Karr
Elinye lamakhasimende ethu linohlu lwamakhasimende angaphezu kuka-100,000 elilethe kuwo kodwa alinawo amakheli e-imeyili okuxhumana nawo. Sikwazile ukwenza isithasiselo se-imeyili esifaniswe ngempumelelo (ngegama nekheli leposi) futhi siqale uhambo lokwamukela olube yimpumelelo. Amanye amakhasimende angu-60,000 esiwathumelela ikhadi ngolwazi olusha lokwethulwa komkhiqizo. Ukushayela ukusebenza komkhankaso, siyafaka